Jananinepal.comहेर्नुहोस नेपालकै पहिलो उठेर सितार बजाउने महिला सिता मैया राजचलको सितार बजाउने सैलि ( भिडियो सहित ) - Jananinepal.com
हेर्नुहोस नेपालकै पहिलो उठेर सितार बजाउने महिला सिता मैया राजचलको सितार बजाउने सैलि ( भिडियो सहित )
भक्तपुरमा जन्मथलो अनि थानकोट बस्दै आउनुभएकी नेपालकै पहिलो उठेर सितार बजाउने महिला सिता मैया राजचल आज जननि नेपालको अथितिको रुपमा आउनुभएको छ । नेपालको नाम उच्च राख्दै देश बिदेशमा आफ्नु प्रस्तुतिको कारण चर्चित हुनुभएकि सिता मैया राजचल जि सगको मिठो कुराकानी प्रस्तुत गर्दै छौ ।
स्वागत छ सिता जि जननी नेपालमा हजुरलाई
– हस धन्यवाद सर्व प्रथम यस जननि नेपालका सम्पुर्ण कार्य युनिट लाई धन्यवाद ग्यापन गर्न चाहन्छु ।
तपाई यस सांगीतीक क्षेत्रमा लाग्नुभएको कति भयो र यो क्षेत्र कहाँ बाट सुरु गर्नु भयो ?
-मैले यस सांगीतीक क्षेत्रमा प्रबेश गरेको तेत्तीस बर्ष भयो । सानो छँदा म भजन र्कितन गाउने हारमोनियम बाजाउने गर्दथे । यसरीनै भजन गाउदै जादा म एक दिन ललिता ताम्राकारको घरमा पुगे उहाँ तत्कालिन प्रख्यात तवला बाजकको भतिजि हुनुहुन्थियो । उहाँँको घरमा मैले सितार देखे देख्ना साथ बजाउने रहर लाग्यो र म हरेक दिन एक घण्टा उहाको घरमा गएर सितार बजाउथे त्यस समय म कक्षा ८ मा अध्यनरत थिएँ । एस .एल. सि. पछि मैले ललित कला क्याम्पसमा पढाई सुरु गरेर गायन क्षेत्र तिर लागे तर क्याम्पसमा पुरानै राग दोर्होयाउनु पर्ने भयो र मैले सितार बजाउने निणय गरे ।
तपाई सांगीतीक क्षेत्र तिरै हुनुहुन्छ कि अरु कुनै ब्यवसाय वा कुनै काम गर्नुहुन्छ ?
– म हाल राष्ट्रिय नाचघरमा सितार बादकको रुपमा कार्यरत छु । संगीत बाहेक अरु केहिमा ध्यान नजाने भएकोले मैले यसैलाई पेसा र कामको रुपमा निरन्तरता दिरहेको छु ।
तपाईले पछिल्लो समय रिलिज गर्नु भएको कुनै एक म्युजिक भिडियोको बारेमा थोरै बताइदिनुहोसन ?
– मेरो पछिल्लो समय रिलिज भएको म्युजिक भिडियो द जर्नि हो यसको सिडिको नाम जर्नि अन फ्रेट्स हो जस भित्र मैले बजाएको 8 धुन समावेश गरीएको छ । यो म्युजिक भिडियो २०७५ असोज ५ गते शुक्रबार सयुंक्त राज्य अमेरीका बाट आउनु भएका सान्त रोजा काष्ठमण्प लाइन्स क्लबका अध्यक्षय नारायण सोमनामे ज्यु को हात बाट बिमोचन गरीएको थियो ।
तपाईको बिचारमा संगीत के हो ?
-संगीत केवल मनोरञ्नको साधन मात्र होइन यसले मानिसको मन सान्त बनउनुको साथै कुनै रोगको पनि निवारण गर्न सक्छ ।
अन्तमा संगीत क्षेत्रमा लाग्न चाहने हरुको लागी के भन्न चाहनु हुन्छ ?
-संगीत पबित्र र आनन्दमय छ यसलाई सहि ढंग बाट अगाडि बढाउनुहोस बिदेशि परम्परा संगीतमा नभित्राउन अनुरोध गर्दछु हस धन्यवाद ।